एकैरातमा १० करोड भन्दा बढीको सम्पति बाढीले बगाएर लागेपछि उनले रुँदै भने, ‘सुकुम्बासी भए हजुर’ — newsparda.com
एकैरातमा १० करोड भन्दा बढीको सम्पति बाढीले बगाएर लागेपछि उनले रुँदै भने, ‘सुकुम्बासी भए हजुर’
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र बाढीको बितण्डाले तहसनहस छ। बस्ती र बजार नदीमा मिसिएको छ। केहीको मृत्यु भएको छ, कैयौं हराइरहेका छन् र धेरैका घर, व्यवसाय, खेत सबथोक सखाप भएका छन्। मेलम्चीको अवस्था हेर्दा लाग्छ यहाँ केहीथोक जोगिन पनि सम्भव रहेनछ। तर, यस्तो बितण्डामा पनि ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट मेलम्ची बजार र आसपासका धेरै ठाउँ जोगिएका छन्। सम्पति सत्यानाश भएको छ तर त्यसको तुलनामा धेरैको ज्यान जोगिएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारलाई बाढीले बेहाल तुल्याएको छ । मंगलबार इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची बजारका करिब एकसय घर पूर्ण रुपमा डुबानमा परेका छन् । घरको तीन तलासम्म लेदोले डुबेको अवस्था छ भने सारा सामान छाडेर ज्यान जोगाउनकै लागि नजिकैको विद्यालयमा आश्रय लिएका स्थानीयवासीका लागि गाँस, बास र कपासको समस्या टड्कारो भएको छ ।
हिजो (मंगलबार) दिउँसो चारबजे एक्कासि हामीलाई फोन आयो। त्यो माथिल्लो क्षेत्रबाट आएको फोन थियो। फोनमा खबर पनि आयो, हेलम्बु र पाँचपोखरीबाट निकै ठूलो बाढी आएको छ। तत्काल तल्लो क्षेत्रका मानिसहरुलाई सुरक्षित बनाउनुहोला। सुरुमा त हामीलाई त्यो खबर पत्याउनै मुस्किल भयो। किनभने त्यस्तो भीषण बाढी आउनेगरी पानी परेको थिएन। छेउमै बगिरहेको मेलम्ची पनि त्यस्तो अस्वाभाविक थिएन, सामान्य रुपमै बगिरहेको थियो। तर, केही समयपछि नै इन्द्रावती नदीमा वाढी आउन सुरु भयो। अनि हामीलाई लाग्यो, माथ्लो बेल्टबाट आएको खबर सही रहेछ।
हामीले तत्कालै प्रहरीलाई खबर गर्यौं र प्रहरीको सहयोगमा माईकिङ शुरु गरायौं। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिदेखि जो जो सकिन्छ, सक्रिय भएर सूचना प्रवाह गर्यौं। र सम्भव भएजति चाँडो सबलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान सक्यौं। खबर फैलिएपछि मेलम्ची वजारमा मानिसहरु टार क्षेत्रमा आएर बस्न थाले।
मेलम्चीमा हामी थुप्रै वर्षदेखि होटल चलाउँदै आएका छौं। दुःख गरेर कमाएको पैसा र धेरैजसो ऋण लिएर हामीले यहाँ दुईवटा घर बनाएका थियौं। चारतले घर छत मात्र देखिने गरी पुरिएको छ, तीनतले घर त पूरै पुरिएको छ।
बैंकबाट करिब २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर बनाएको घरको यो हालत भएपछि अब कहाँबाट कमाएर त्यो ऋण तिर्ने होला? अलि अलि खेत थियो, त्यो पनि हेर्दाहेर्दै बगर भएको छ। अब न खेत रह्यो न घर। हामी एक रातमै कहाँबाट कहाँ पुग्यौं। हेर्दाहेर्दै सुकुम्बासी भयौं।
यही ठाउँले हामीलाई गरिखाने मेलो दिएको थियो। अब गरिखाने पेसा पनि रहन्न होला। घर बनाउँदा लिएको ऋण बैंकले माफीमिनाहा दिने कुरा भएन। हिजो रातिदेखि नै सुत्न सकेको छैन। खान मन छैन। हामी त पलपल त्यही लेदोमा पुरिएको घर हेर्दै, रुँदै बसेका छौं।
अहिले स्कूलमा आएर बास बसेका छौं। अब कति दिन यसरी बस्ने? यहाँ नबसे कहाँ जाने? घरिघरि फर्केर घर हेर्न जान्छौं, मन त्यसै भक्कानिएर आउँछ। अब भोलिदेखि कहाँ जाने? के गरेर खाने? हामी बेवारिसे भयौं। पसलभित्र पाँच लाख नगद र गहना थियो, त्यो पनि निकाल्न पाइएन। एकसरो लगाएको लुगाबाहेक केही छैन। धन्न ज्यान बचेको छ। बेलैमा खबर पाएकाले ज्यानसम्म बचाउन सक्यौं। आखिर बच्ने यही ज्यान मात्र न भयो।
स्थानीयवासी मच्छिन्द्र श्रेष्ठ बाढीले आफ्नो परिवारको उठीबास नै गराएको बताउँछन् । १० जनाको परिवार रहेका श्रेष्ठले ०७४ सालमा ऋण लिएर चार तले घर बनाएका थिए । मंगलबार लेदोसहित आएको बाढीले उनको घर डुबाएको छ । ‘चार तले घरको एक तलामात्र देखिएको छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘तीन तला पुरिएको छ ।’ करिब ४० लाख खर्च गरेर बनाएको घरको ऋणसमेत तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए ।
‘अब त खाने, बस्ने नै ठेगान भएन,’ उनले भने, ‘कसरी गुजारा चल्छ होला ! केही सोच्नै सकेको छैन ।’ बाढी आउँदैछ भनेर हल्ला चल्न थालेपछि साँझ घर छाडेर आफूहरु सुरक्षित स्थानतिर गएकाले मानवीय क्षति हुन नपाएको उनले बताए । स्थानीयवासी नन्दाकुमारी श्रेष्ठ पनि बाढीले उठीबास लगाएको बताउँछिन् । उनले १० वर्षअघि जग्गा किनेर करिब ८ वर्षअघि घर बनाएको सुनाइन् । ‘बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही घरमा एउटा सानो होटल गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थियौं ।’